Ceelasha Biyaha, Somalia
Waxay shirkada #Kirosom u haysaa macaamiisheeda #Dhul_Raqiis ah oo kuyaala
Deegaanka Ceelasha Biyaha. Agagaarka shirkada Korontada ee #BECO. Waa Dhul leh Documents saxan. #Cabirka Booskii waa 20x15m2. #Qiimaha waa 💵 $3,500 israac ah.
Faahfaahin dheeri ah, kala soo xariir:
☎️ 0613 805 526 / +252 612 922 242
Address: Ceelasha Biyaha, Somalia
State/county: Shabeellaha Hoose
Neighborhood: Ceelasha Biyaha
Updated on March 6, 2019 at 5:52 am
Dhul IIB Ah - Ceelasha Biyaha, Somalia